दिपाश्री भन्छिन्, ‘दिपक अविवाहित भए बिहे हुन्थ्यो’ - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
दिपाश्री भन्छिन्, ‘दिपक अविवाहित भए बिहे हुन्थ्यो’
चर्चित अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला अहिले नयाँ चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को सुटिङपछिको काममा व्यस्त छिन् । यो चलचित्रको डबिङ, सम्पादन, कलर लगायतका काममा दिनरात खटिएकी दिपाश्रीको स्वभाव अरु धेरै कलाकारको भन्दा फरक छ ।
मनमा पाप छैन । सकेसम्म सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहन्छिन् । सबैसँग मुसुक्क मुस्कुराएर बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । कसैलाई केहि भन्न मन लाग्यो भने फ्याट्टै बोल्छिन् । उनै दिपाश्रीले एउटा अचम्मको रहस्य खोलेकी छिन् ।
उनलाई कान्तिपुरका रामजी ज्ञवालीले एउटा प्रश्न सोधे, ‘तपाइको सपनामा कोहि पुरुष आएर हैरान पारेका छन् ? छन् भने नाम खुलाइदिनुस् न ∕’ प्रश्न सुनेर एकछिन मौन रहेकी दिपाश्रीले केहि समयमै जवाफ फर्काइन् । भनिन्, ‘केहि बर्षअघि सम्म अभिनेता राजेश हमाल आइरहनुहुन्थ्यो, अहिले दिपकराज गिरीले हैरान पारेका छन् ।
राजेश हमालका चलचित्र प्रदर्शन हुने समयमा धेरै जसो उनले सपनामा आएर हैरान पारेको र आजभोलीका सपनामा भने दिपकले अरु कसैलाई ठाउँ नदिएको उनले खुलाइन् ।
उक्त अन्तरवार्तामा दिपकराज गिरी अविवाहित भएको खण्डमा आफु उनिसँग विहे गर्न समेत तयार भएको बताइन् । मुस्कुराउदै उनले भनिन्, ‘जतिबेला गफ भैरहने पुरुष पनि दिपकनै हो । स्वभाव पनि मिल्ने । काम पनि मिल्ने । तर के गर्नु उसले विवाह गरिसक्यो ।’
दिपाश्री ४० बर्ष माथिको उमेरमा पनि अझै अविवाहित छिन् । दिपाश्रीले आफु चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेको र भनेजस्तो पुरुष नभेटेकाले बिहे नभएको समेत बताइन् ।
पुरा अन्तरवार्ता पढ्नुहोस्
दिपाश्रीसँग ‘पुरुषवार्ता’, भन्छिन्– ‘मिल्ने भए दिपकसँग बिहे गर्थें’
प्रकाशित :श्रावण २७, २०७६
ऋचा शर्माको बिहेको साइत फाइनल
गुपचुप रुपमा सबिन र अनुको बिहे !
फागुनमा आँचलको बिहे फाइनल
बिहे अघि पोखरामा ऋचाले दिइन् पार्टी
हमाल पत्नी मधु भट्टराई भन्छिन्, ‘बच्चा जन्माउने विषयमा सोचेकै छैनौं’
पूजा शर्माको सम्झना बिर्सना मुड मंसिर १९, २०७६
ऋचा शर्माको बिहेको साइत फाइनल मंसिर १७, २०७६
विराजले खोले रहस्य, ‘स्क्रिप्ट सुनाउँदा नै हिरोइन रोइन’ मंसिर १३, २०७६
आफ्नै कलाकारले साथ नदिएपछि... कार्तिक १८, २०७६
सबैको दिन आउँछ, मेरो किन नआउला ? : सबिन श्रेष्ठ कार्तिक १७, २०७६
बिहे अघि पोखरामा ऋचाले दिइन् पार्टी कार्तिक १७, २०७६
गर्भावस्थामै सिर्जना सुब्बाको फोटोसुट कार्तिक १४, २०७६